Madaxwaynaha Galmudug iyo Safiirka Qadar oo Kulan yeeshay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Madaxwaynaha Galmudug iyo Safiirka Qadar oo Kulan yeeshay
Jul 30, 2020 - 19 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Safiirka Dowladda Qadar u qaabilsan Dalka Soomaaliya Danjire Hasan Bin Hamza Asad Mohammed ayaa Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye kusoo booqday hoyga uu ka deganyahay magaalada Muqdisho.
Waxay ka wadahadleen arimo kala duwan oo la xidhiidha xaalada dalka iyo mashaariicda Horumarineed ee qadar ka fuliso dalka.
Soomaaliya iyo Qadar ayaa waxaa ka dhexeeya Xidhiidh wanaagsan.
Waad fahmi in Somalida daanyeeradda ah wax ka qaldanyahiin marka aad aragto hogaamiye maamul beeleed Qoorqoor amaba kuwa maamul beeleedyada kale, amaba xataa hogaamiyayaasha maamulka dowladda dhexe ee Somaliya oo carab khaniisiin ah oo Imaaraad amaba Qatar hoosta ka galgalaya.
Arrinkaan korre waxaa ugu wacan oo ka dhigay Somalida dad u badan dulli daanyeero ah iyo Afweeyne oo ahaa wasaq. Meeshii eey Somalia ka noqon laheeyd wadan ka taajirsan carabtaan xun, ayuu Somaliya ka dhigay Afweeyne wadanka Somaliya wadamadda aduunka ugu faqrisan. Ileeyn waa daanyeer badow ah oo Mareexaan ah, oo maskax fiican laheeynee. Hadeer Farmaajo waa lamid Afweeynaha uu rabbo in uu copy gareeyo. Mother fuckee caqli daanyeer leh.
Ma fahamsanna, not only Somali oo dhan, laakiin waxa ugu liita in eey yahiin Ilkayartaas iyo Murusadahaas iyo eelaayda ka buuxda argagixisadda alshabaab in eey yahiin kuwa ugu liita qabiilada Somalida. Daanyeer.
This stupid Qoorqoor maalintuu ka tago caqliga reerkiisa Saleebaan oo u dhigma walaahi waxa lagu barto Harvard, Stanford, Princeton Brown iyo MIT, oo uu raaco hawadda iyo daanyeernimada lagu arkay, lagu yaqaan Somalida badankood oo eey ku jirraan kuwa hogaamiya Somalida, maalintaas ayeey u dhamaan Qoorqoor. Waxuuna noqon daanyeer corrupted laga dhigay.
bal weydi dhismihii dekeda hobyo ee beri dhexe kheyre wed wdey meelaha mase waxey aheyd campaign mucaarad ka habargidir lagula dagalayey oo lagu dejinayey waa inuu war ka keena qoor qoor waa kuwa cigaal ku qurun badane weligey ma arkin wax carabi somali tartay haba yarate
Saaxiib arrinka dakadda Hobyo horray ayaan ugu dhaartay in eey been eey abaabuleen daanyeero Khayre iyo Farmaajo in eey aheeyd. Carabta waxeeyba rabaan in Somaliya kusoo biirin wadamadda saliida soo saara, in other words, in eey Somaliya waligood faqri iyo dulli ahaadaan. Carabta iyaga ayaaba maalin kasta ku murma dal hebel intaas oo fuusta oo saliid ah maalintii ha dhimo iyo maya. Marka Somaliya oo eey ugu yeeraan adoon u maleeyn maayo in eey asxaan u sameeynayaan. Afweeyne iyo Farmaajo iyo dadka caqliga xun ma fahmi karraan waxaan. Guyana iyo Mozambique waa labada dal ee saliida iyo gaaska ugu badan aduunka laga helay. Soo fiiriya in labadaan wadan carab khaniisiin ah dabadda u ruxeen iyo in kale!
Dakad Hobyo oo Qatar dhiseeyso kulahaa daanyeero Farmaajo iyo Kheeyre! Yaab. Waa waxa dadka caqliga daanyeerka leh loogu sheekeeyo.
WAR DADOW, anigu xilligi Dagaalki Xamar Waxaan joogay guri NIN madaxda Saleebaan ka mida oo xitaa shirkooda ayyaa la socday MARKA waaxaan ku qanacsanahay inuusan 2BA Miirre AHAYN Reerkaas Sababta oo ah Reerkaasi ma laha Dhaqankiisa ee Waxaan u malayn INAY cid kale soo dirsatay oo lagu yiri CAYTAN oo sumcadda reerka ku ciyaar. WBT
Somalia waa lakala qaybsaday…..yaab
Qadar from Galmudug ilaa Lafta Gareenniyo Baay region.
Puntland iyo Somaliland Dubai, Emirates…
Jubbaland yaa biila oo Kikuuyo ahayn.???
Mise Madoobe, Awoowgaa la gub carab ku oran oo caano geeliisa ka badan.. kkkkkkk
Dubai oo dekedo ka ganacsada marabaan deked ayaga hoos imaan in East Africa laga furo…run
Qadar oo Gas ka ganacsata marabaan in Gas laga soo saaro Somalia iyo in hawada Somalia oo weyn laga xiro..
Daanyeerta Maryooley meeday dantootii?
Qoorqoor waxaa lagu oran, qarashkaaga bixin ee anaga dhinaceena tahay.. Xag buuna u leeyahay waayo kuwii ka horeeyey ayaa yes yiri….Xukunkiisa lacag u baahan tahay……
Xaaf oo qaraab tagay iga dheh…kkkkkkkk
GUDOOMIYA MAAMUL GOBOLEEDYADA MUDANE QOOR BARYAHAAN SHIRBUU KA BIXI LA’YAHAY, SIDII SHIRKII DHUUSAMAREEB LOO QABTAY, KAADHKII DHEXDHEXAADINTAA LABO KAC LEEYAY,
Hadii uu Qoorqoor yahay nasab run ah oo Saleebaan ah walaahi in uusan u sameeyneeynin wax just because daanyeerii qabiilada kale ayaa yes man noqday oo dhahay.
Nasab hadii uu yahay Qoorqoor foojignaan dheeri ah, sir baddan iyo siyaasad, dad isku wadid, love for God and country, jaceeyl Ilaaheey iyo dalka iyo calaamado kale oo wanaagsan ayaa laga arki.
Laakiin hadii uu yahay nin lasoo seexiyay, oo dhiigiisa eey lamidyahiin daanyeerkaan Ahmed Somali ee wacalka ah ee isku qufulay in uu Xawaadle yahay, isagga oo Daarood ah, then u have manchurian candidate syndrome.
Sxb Isdeji meesha qoorqoor waa nin shilin haysan, calaashaan shacabkiisa wax kasoo gelin oo canshuur ka qaadan.
Waa ninka ugu jilicsan maamulada maanta oo mushaar siin karin xildhibaanadaa iyo asakarta amniga sugta..
Walaahi in xitaa maya oran Carab lacag wada….run
Macal Farmasjo ku oran maamulkiisa anaa u dagaaline waa in ila shaqayso..
Walaahi Deni iyo Muuse Biixi waa ragga haysta lacag Gaal iyo Muslim uga baahnayn… laakiin ku filnayn..
150 million Boosaso ka qaata..Barbara 220 million sanadkii.
Caashuur ka qaata from Galkacyo to Raascasayr/Lasqoray….
Somaliland Tukaraq To Lowyacado.
Sxb Riyada ka bax…..
Waa hubaa in Carabkaan ku oran karo Qoorqoor soo gurguuro,i tus in daacad ii tahay…kkkkkkkkk
Ma saas baad doqon u tahay…..
Nin baahan oo 1000 qof farqaha la haysto wadani ma noqon karo..taas ogow
Qoorqoor waan ugu garaabin in qaraab tago.
Lacag waa cunis, dantaatuna waa meesheeda…
Material world, ayaan joognaa.🖐
Maya saaxiib saas doqom uma ahi. Waan ogahay waxa aan ka hadlayo.
Waxa aad sheegtay waan aqriyay laakiin maya, jackpot ka, ka weeyn waxa aad sheegtay oo dhan waa iimaan suggan, iyo isku kalsoonaan.
Dakaddaah Boosaaso iyo BeRbera oo uu Afweeyne dhisay, dhaceen, isa siiyeen Majeereen iyo Isaaq maahan waxa kaliya oo Somalida ku noolaan karto. Somalida caqliga daanyeerta ah waxeey ku noolaan karraan iyaga oo xoolahooda hilibkooda cuna, caanahoodana cabba,beerahoodana fasha, bartana sidda malaayga loo dabto leona cunno (waa arrin wanaagsan mar kasta oo carabta khaniisiinta ah diidan xoolaha Somalida).
Marka maya, kuguma raacsanni waxa aad ka aaminsantahay Somalida ee ah in eey cadaan iyo madow iyo carab u soo gurguurtaan.
Goe bless Somalia
Qoorqoor aniga waxooga waan la dhacsanahay waayo wuxuu muujiyay leadership markii lagu shirahayay Dhuusamareeb.
Tan la shirka Qatar dee wuxuu kala mid yahay dadkii adhaxda u jabay ee dawarsiga aanan natiija fiican ka keenin.
Haddii uu dekad ka dhiso xitaa ama jidad ku xaadho wax bay ahaan lahayd.
Si kastaba yaynaan ku talax tegin ninkan
Suldsan Zubeer ciid wanaagsan addiga iyo muslimiinta oo dhan. Caafimaadka Ilaaheey hanoo badiya, kuwa xanuunsanna Ilaahewy caafimaad hasiiyo, kuwa kale ee u baahan nabad, iyo cunto, iyo hooy Ilaaheey hasiiyo.
Aamin yaa Allah. Wa shukran
ISLAAMEY, daya axadkaan SEBI oo isu haysta inuu yahay aqoonyahan kulahaa; “…lamidyahiin daanyeerkaan Ahmed Somali ee wacalka ah ee isku qufulay in uu Xawaadle yahay, isagga oo Daarood ah, “ILAAH SWT aan idinku dhaashe BAL kaasa leh Waxaan ahay Aqonyahan!!! MADAMA aan rabo inuu suuqa ka baxo, Meel kalana Waan idinka tusi Wuxuu Qoray; “This stupid Qoorqoor maalintuu ka tago caqliga reerkiisa Saleebaan oo u dhigma walaahi waxa lagu barto Harvard, Stanford, Princeton Brown iyo MIT.≈©≈Halkaan u socdo waa halkaan; “…Waxa lagu barto Harvard, Stanford, Princeton Brown iyo MIT” Yacni wuxuu qabaa inay yihiin Jamacadaha kaliya uu cilmigu yaalo!!! MABA OGA inay kuwaasi Aqoon u raadsadaan AL-AZHAR iyo Qaahira ≈©≈BAL Gardarradayda Maxaa SEBI hadaaq barada i daba dhigay, BAL Adba!!!. WBT
Ahmed Somali in aad daanyeer caqli laawe tahay noo sheeg daawadii ugu dambeeysay ee jaamacadda Alazhar sameeysay amaba wax uu qof kasoo baxay amaba wax ka dhiga aduunka kusoo korshiayay 100kii sanno ee lasoo dhaafay? U r so far stupid u don’t even know your mouth from your ass! Waana dhaqankii ina adeerkaa Afweeyne kusoo barray. Daanyeer.
Yes, wax kaa qaaday DNA ma jirto, so, waxa aad tahay ma naqaan, and we don’t give a fuck, ma kala jeclin waxa aad adkaaga urraya ka sheegeeyso, waxaa muhiim noo ah ficilkaada iyo qabiilada aad u hiilineeysid, iyo qabiilada aad dulimineeyso. Facts and actions.
Asxaabta Ciid Mubaarak
War badan ku qoray page hoose caawa..hadaad waqti u haysaan aqriya.
LOP caloosha furay caawa. inta ogaa meeshaas ku qoray..Sheik Shariif iyo Xasan Sheik ku jiraan..
WAR ahbalyahaw 2BA MIIRREE, ku faan afkaaga ee haku faanin Luuqad MID aan Nijaasta ISKA dhiqin. ≈©≈DHAGAX yaa u caqli celikara!!!. WBT
Xagarciideed, Barasho wanaagsane adeer SOO dhawow. WBT
Ahmed Somali daanyeer ayaad tahay. Kuwa aad ku sheegeeyso in eeysan kaadidada isla dhaqin sidda eey aduunka hadeer kaaga sharaf badan yahiin ayeey walaahi aaqiranna laga sharaf badan yahiin. Daanyeer eey ah ayaad tahay. Sidda aad aduunka ku tahay ayaad aaqiranna ku ahaan. Hadii aad naxariis badan tahay, hadii aad sadaqo badan tahay, hadii aad cibaado badan tahay iyo xataa hadii adiga oo Daarood ah ah aad Xawaadle sheegato, hadanna aad dadka Xawaadlw dulmiso, eey daanyeer ah oo cadaabta kula sheekeeysaan Afweeyne ayaad noqon.
Daanyeer stupid ah ayaad tahay.